१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
नेकपा विभाजनपछि लामो समय मौन जस्तो रहनुभएको थियो, पछिल्लो समय प्रचण्ड माधवपक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउनुभएको भन्ने सुनियो, कुरा के हो ?
त्यो सत्य कुरा होइन । नागरिकता किन खोजेका हुन् त्यो कुरा मलाई थाहै छैन । त्यो चाँही रामकुमारीजीले भन्नुभएको हो । तर मैले काँही पनि दिएको छैन ।
रामकुमारीले भन्नु चाँही भएको थियो ?
भन्नुभएको हो । तर मैले कसैलाई बुझाइन ।
बाहिर त प्रदिप नेपालले माधव प्रचण्ड पक्षमा खुल्नु भयो र आधिकारिकताको लागि त्यतै नागरिकता बुझाउनुभयो भन्ने व्यापक हल्ला छ त ?
त्यो प्रचार होस्, मलाई केही आपत्ती छैन । म सधैंभरी माधव नेपालसंगै छु । नवौं महाधिवेशनमा मात्र म माधव नेपालललाई छोडेर केपी प्यानलमा गएको हुँ । मैले मेरो आफ्नो निष्ठा बेचेर भनेपनि मैले माधव नेपाललाई विगतमा सघाएको हो । म अहिले पनि महाकालीको बाँध नबनेकोमा दुखी छु । म त्यो बेला भित्रैदेखि त्यसको विरोधी हो । तर मैले महाकाली सन्धीको बेला माधवलाई समर्थन गरेको हुँ । तसर्थ बेग्लै कारणले माधव नेपालसंग मेरो सम्वन्ध छ । अहिले पनि माधव नेपाल पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने म खुसी छु ।
प्रतिनिधीसभा विघटन भइकन लगत्तै नेकपा जसरी विभाजन भयो, यसमा तपाँइको के प्रतिक्रिया छ ?
यो विघटन नहुनुपथ्र्यो । मेरो सामान्य मनले बुझ्दा कमसेकम केपीले अध्यक्ष भएपछि सबैलाई समेट्न सक्नुपथ्र्यो । नेता हो नी उहाँ त । नेता पनि अरु जस्तै सन्किने, फन्किने गरेर के हुन्थ्यो । हुँदैन नी । पिडा उहाँहरु बताउनुहुन्छ । त्यस्तो पिडा उहाँहरुसंग भन्दा बढी हामीसंग छ । मैले जति त अरु कसैले भोगेको छैन पिडा । सुरुमा त मलाई अविश्वास गरियो । त्यसैले म महाधिवेशनमा हारे । केपी ओलीसंग म हिजोका दिनमा लागेंकै हो । म र मुकुन्द न्यौपाने ज्यान फालेर उहाँको पक्षमा लाग्यौं । ज्यान फालेरै सघाएको हो । तर उहाँले त्यसलाई चिन्न पनि सक्नुभएन । उहाँलाई त्यती चिन्ता नै देखिएन हाम्रो बारेमा । हामीहरु दुइ जनालाई नै लात्ताले हानेर उहाँले बाहिर निकालीदिनुभयो । त्यसैले केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति कोही सहमत हुन सक्दैन । हामी जस्ता लाई पनि युज गर्न पाइन्छ ?ह ामी त उहाँका साथी हौं नी ।
अहिले कस्तो लाग्छ त तपाँइलाई ?
मैले यसो विगत फर्केर हेर्छु । अहिलेको परिदृष्य झल्झली नाँच्छ । शंकर पोखरेल उता हुनुहुन्छ । बेदुराम भुषाल यता हुनुहुन्छ । यि मुख्य नेता जो ६ जना छन् । उहाँहरु ६ जना नै रिटायर हुनुपर्छ । अन्य राम्रा साथीहरु कोही यता छन्, कोही उता छन् । ति साथीहरु जसको मैले राम्रो भविश्य देखिरहेको छ, उहाहरुको भविश्यको बारेमा चाँही मलाई चिन्ता लागेको छ ।
पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको सरकारले बीचैमा प्रतिनिधीसभा विघटन प्रश्ताव ल्याएपछिको तपाँइको के प्रतिक्रिया छ ?
बीचैमा प्रतिधिीसभा विघटन गर्नु गलत हो ।
प्रतिगामी कदम नै हो यो ?
ह्या ….. छोड्दिनुस् । बेकारको कुरा । नेपालीहरुले शव्द सुनेका छन् तर त्यसको अर्थ पनि बुझेका छैनन् । कसले कसको प्रतिगमन गरिदिएको छ ? पार्टी त्यही छ । विचार त्यही छ । सिद्धान्त त्यही छ ।
संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आफु अनुकुल व्याख्या गरेर भंग किन गरेको भन्ने प्रश्न छ नी
विघटन गर्न पाउने व्यवस्था त छैन । तर तपाँइसंग विकल्प रहेन भने तपाँइ के गर्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? यो त प्रधाजमन्त्रीको विशेषाधकार हो । तर त्यो विशेषाधिकार जथाभावी प्रयोग गरिनुहुन्न । केपीले त्यो गल्ती गर्नुभयो । र, यतातिर हाम्रोतिर भन्नुहुन्छ भने माधवले प्रचण्डलाई साथ दिएर गल्ती गर्नुभयो । हाम्रा राम्रा मान्छे यिनै दुइवटा हुन् अहिले । दुइवटैबाट गल्ती भयो । उहाँहरुले एक अर्काप्रति विश्वास राख्न सक्नुपथ्र्यो । तर राख्नु भएन ।
पार्टी विभाजन डिल डिलमै पुगिसकेपछि एकता बचाउन पहल गरिदिन भन्दै तपाँइको घरमा नेताहरु धाएका थिए नी ?
आउन त आउनु भयो, तर त्यतीबेला धेरै समय अघि बढिसकेको अवस्था थियो । म त्यसको भोलिपल्टै केपी कमरेडकोमा पुगें नी त । हामी दुइजना बसेर कुरा ग¥यौं । तपाइ र माधवको बीचमा अर्को कोही मान्छे बसेको लाजमर्दो हो, त्यसैले दुइजना बस्नुस्, कुरा गर्नुस्, झगडा गर्नुस् तर पार्टी नफुटाउनुस् भनेर मैले भनिदिएर आएको हो ।
तपाँइले त्यस्तो सुझाव दिँदा के भन्नुभएको थियो केपी ओलीले ?
हुन्छ, म बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो ।
तर व्यक्ति व्यक्ति बोलाएर उचाल्ने, पछार्ने र आफ्नो अनुकुल हिँडाउन प्रयोग गर्ने र अहंकारी काम भयो भन्छन् नी त ?
हुनसक्छ । केपी ओलीको व्यवहारबाट म सन्तुष्ट छैन । सबैभन्दा असन्तुष्ट नै छु म । किनभने उहाँले जे जे भन्नुभएको छ नी त्यो कुरा मैले भर्खरै निकालेको निवन्ध संग्रहमा सबै समेटेको छु । झुटो कुरा केही लेखेको छैन मैले । उहाँले त मलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर मन्त्री बनाउने भन्नुभएको थियो । तर पाइन मैले । पाइन मात्र होइन मैले त पार्टी भेट्नै पाइन ।
केपी ओली किन त्यस्तो भएका होलान्, उनी ठिकै भएर वरिपरिकाले बिगारेका हुन् की स्वभावै त्यस्तो हो ?
होइन, होइन । संसारमा केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने शक्ति नै छैन । उहाँमा नै बढी निरंकुशताको हावी छ । उहाँलाई कसैले केही गर्न सक्दैन ।
तपाँइले चिनेदेखि केपी ओली त्यस्तै निरंकुश हुन् की पछि भएका ?
पहिलेदेखि नै त्यस्तै हुन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको एकताको भविश्य के होला ?
त्यो अर्थहिन छ । कुनै सिद्धान्त छैन । विचार छैन । योजना छैन । किन मिलेको भन्दा केपी ओलीले दुइवटैलाई पेले भनेर मिलेका । त्यस्तो पनि हुन्छ । बरु आ आफ्नो गरि खाँउन । माओवादी केन्द्रको साथीहरु उतैतिर आफ्नो गरिखानुहुन्छ, हामी यता गरिखान्छौं । दुइवटा पार्टी त माओवादी केन्द्र र एमाले न हुन् । उहाँहरु अहिले पनि अधिनायकत्व बोकेर हिँड्नुहुन्छ, माक्र्सवादले अधिनायकत्वलाई मान्दै मान्दैन । एउटा गल्ती के भयो भने हाम्रा नेताहरु कसैले माक्र्स पढेनन् । झलनाथले पनि पढ्नुभएन । माओवादी पक्षका साथीहरुले पढ्दै पढेनन् । केपीले पनि पढ्नुभएको छैन । माक्र्सवाद भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको चिनारी हो । उहाँहरु कसैले त्यो कुरा पढ्नुभएन ।
पुर्व एमाले जति एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नी ?
त्यो सही कुरा हो । म पनि त्यही भन्छु । हामी जनताको बहुदलीय जनवादीहरु एक ठाँउमा हुनुपर्छ । एक्काइसौं शताव्दीमा समाजवाद आँउदै आँउदैन । समाजवाद चाँडो आयो भने २५ औं शताव्दीमा आउने हो । ३–४ सय वर्ष पहिले त हामी समाजवादमा जानै सक्दैनौं । त्यसैले जनताको वहुदलीय जनवाद पक्षधरहरु एक हुनुपर्छ ।
पुर्व माओवादीले बोकेको सिद्धन्त पनि उही वहुदलीयता स्वीकर्ने भइसकेपछि उ पनि एमालेकै बाटोमा आएको भन्न मिल्दैन र ?
छैन । जवनताको बहुदलीय जनवाद ग्रहण गरेको भए त कुरा सिद्धिहाल्थ्यो नी । आसपासमा आएर भएन नी त अंगिकार नै गर्नुप¥यो । जवज ग्रहण नगरीकन नेपालमा कोही पनि माक्र्सवादी हुन सक्दैन । स्वय् माधव नेपाल पनि माक्र्सवादी हुन सक्नुहुन्न । माक्र्सवाद भनेको प्रजातन्त्र अर्थात व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सिद्धान्त हो । लेनिनवादले सर्वहारा अधिनायकत्वको कुरा गर्छ ।
वामदेव गौतम पछिल्लो समय कतै नलागी एकता अभियान अभियानका नाममा अलग्गै बस्नुभएको छ, यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
उहाँँको प्रयत्न हो । राम्रै छ । उहाँले म गुट बनाएर पनि बस्दीन, प्रचण्ड ओली कतैतिर लाग्दीन भन्नुभयो । उहाँको विचार राम्रौ छ ।
तर केहीले त अवसरको लागि बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजेको भन्छन् ?
जे गरे पनि भङ्रङग लड्यो । पल्लो भित्तो र वल्लो भित्तो ग¥यो । उहाँको यही बैलि थियो । बीचको बाटोमा कहिल्यै जानुभएन । अहिले ठिक गर्नुभएको छ । अर्को कुरा उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद म छोड्दिन भन्नुभएको छ । जो जो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा हुनुहुन्छ, मसंग आउनुस् भन्नुभएको छ । जो जसले छोड्छन् उहाँहरु आफैं सिद्धिन्छन् । आतंककारी हुन्छन् । विप्लवले पनि ढिलो चाँडो स्विकार गर्छन् । माक्र्सले कााही पनि हतियारबन्द संघर्षको कुरा गर्नुभएको छैन । उनले त जहिले पनि प्रजातान्त्रिक कुरा मात्रै गरेका छन् ।
वामदेवलाई हिजो माले कालमा विभाजन पछि एक नम्मर भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गर्नुभयो, अहिले उनले गरेको अभियान टुङ्गोमा पुग्ला, अवसरका लागि होइन भन्ने के आधार छ त ?
उहाँले जे जति सक्नुहुन्छ, जे क्षमताले भ्याँउछ त्यही गर्नुहुन्छ । यसमा म उहााको कपट देख्दिन । एउटा एजेन्डा राखेर बाहिर अर्को बोलेको देख्दिन । तर उहाँ अस्थिर मान्छे हो । आज एकथोक बोल्नुहुन्छ, भोली अर्को थोक । बोलिमा विश्वास पनि हुँदैन ।
वैशाखामा निर्वाचन होला त ?
मलाई निर्वाचन होला भन्ने लाग्दैन । निर्वाचनको तिथि त तोकियोे तर त्यतीखेरसम्म पार्टीहरु तयार होलान् जस्तो लाग्दैन ।
तर प्रधानमन्त्री ओली त जसरी पनि गराएरै छोड्छु, एक दिन पनि पर सार्दिन भन्नुहुन्छ ?
उहाँले त भन्नुभएको छ नी । उहाँलाई गराउनु छ, भन्नुभएको छ । जसलाई गराउनु छैन, उसले हामी भाग लिन्छौं भन्नुप¥यो नी । अलि अपारदर्शी ढंगले केपी ओली जानुभयो । उहाँले कमसेकम सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यहाँबाट पास गराउनुपथ्र्यो ।
अब मुलुकको राजनीतिक भविश्य कस्तो होला ?
अलिक अध्यारो छ । धुमिलो छ । त्यसलाई ठिक बाटोमा ल्याउन यी सबैले राजनीति छोडिदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका जति सबैले राजनीतिक सन्यास लिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई पठाउने काम गर्नुपर्छ । काँग्रेसमा पनि शेरबहादुरले छोडिदिए भने सबै राम्रोसंग चल्छ । धेरै राम्रा युवाहरु हुनुहुन्छ ।
बुढो गोरुले जस्तो ओगट्न भएन ?
पात्रले समस्या होइन समस्या प्रवृतीमा होइन र ?
होला, त्यो त आ आफ्नो भनाई हो नी त । मलाई के लाग्छ भने बुढाहरुलाई हामीले विदा दिने हो भने नयाँ प्रतिनिधीहरुले राम्ररी गर्छन् । उनीहरु बुढाहरुबाट गाइडेड हुँदैनन् । स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ ।